राशि भनेको के हो ?, What is zodiac sign?, Mero Jyotish | Mero Jyotish
राशि भनेको के हो ? What is zodiac sign?
वैदिक ज्योतिषमा व्यक्तिको जन्म राशि निर्धारण गर्नका १२ राशिहरू रहेका छन्। यी १२ राशिहरुमध्ये जातकको राशि के हुनेछ, यो चन्द्रमाको स्थितिमा निर्भर गर्दछ। तिनीहरूको आफ्नै अलग-अलग विशिष्ट प्रकृति, गुणहरू र प्रतीकात्मक चिन्हहरु छन् र तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न तिनीहरूका स्वामी ग्रहहरू छन्। वैदिक ज्योतिषमा सूर्य र चन्द्रमालाई एक एक राशिको स्वामित्व प्राप्त छ। त्यस्तै मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र र शनि ग्रह दुई-दुई राशिका स्वामी हुन्। राहु-केतुलाई छाया ग्रह मानिन्छ, त्यसैले तिनीहरू कुनै पनि राशिको स्वामी मानिदैनन्।
राशिको गणना गर्न तपाईलाई ज्योतिषको ज्ञान हुनुपर्दछ। विद्वानहरूका अनुसार आकाशमा 360० डिग्रीको भचक्र छ, जुन १२ राशि र २७ नक्षत्रमा विभाजित छ। यस तरीकाले ३० अंशको एक राशि हुन्छ। राशिको गणना सूर्य राशि, चन्द्र राशि र नाम राशि गरेर तीन तरिकाबाट गरिन्छ। मुख्यतया सूर्य र चन्द्र राशि धेरै प्रचलनमा छन्। तर जब व्यक्तिको जन्म मिति, समय आदि सहि विवरणहरू उपलब्ध हुँदैनन्, तब नामबाट पनि उसको राशि निर्धारण गर्न सकिन्छ।
राशि वास्तवमा आकाशमा अवस्थित ग्रहहरूको नक्षत्रको एक विशेष आकार र उपस्थितिको नाम हो। आकाशमा न कुनै भेडा छ र न कुनै सिंह छ, सजिलै पहिचानको लागि तारा समूहको आकारको समानता र प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै महर्षिहरूले परिचित वस्तुहरूको प्रकृतिको आधारमा राशिको नाम राखेका छन्। ज्योतिष गणनाको दृष्टिकोणबाट पहिलो राशि मेष मानिन्छ। दोस्रो वृष, तेस्रो मिथुन, चौथा कर्कट, पाँचौं सिंह, छैटौँ कन्या, सातौं तुला, आठौं वृश्चिक, नवौं धनु, दशौँ मकर, एघारौं कुम्भ र बाह्रौं मीन हो ।
ज्योतिष शास्त्रमा राशिको महत्व
ज्योतिषमा राशिको महत्त्व यो तथ्यबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ कि राशि बिना ज्योतिष आधारहीन छ। ज्योतिष शास्त्रमा १२ राशिहरूको विशेष महत्त्व छ। यी राशिहरुले व्यक्तिको जीवनलाई प्रभावित पार्छन्। यी राशिहरूको स्थितिको गणनाको आधारमा ज्योतिषीले व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा जन्म राशि, राशि ग्रह तथा राशि स्वामीको आकलन गरेर व्यक्तिको गुण-अवगुण, प्रवृत्ति, व्यवहार र उसको जीवनमा कति सफलता प्राप्त हुन्छ यसको जानकारी प्राप्त गर्छन्। जन्म राशिको आधारमा व्यक्तिको निवास स्थान, व्यवसाय स्थल र व्यवसायको नामकरण गर्नु धेरै नै शुभ मानिन्छ।
तपाईं आफ्नो राशि तथा कुण्डली सम्बन्धि जानकारीको लागि मेरो ज्योतिषका ज्योतिषीहरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
माथि जानकारी दिए अनुसार राशिको निर्धारण सूर्य, चन्द्र वा नामको आधारमा हुन्छ र जसका कारण राशिहरुलाई अलग-अलग वर्गमा राख्न सकिन्छ। मुख्य रूपमा राशि चक्रका तीन प्रकारका हुन्छन् चन्द्र राशि, सूर्य राशि र नाम राशि।
इस राशिचक्रलाई राम्रोसँग पहिचान गर्नको लागि समस्त आकाश-मण्डलको दूरीलाई २७ भागमा विभाजन गरेर प्रत्येक भागको नाम एक-एक नक्षत्र राखियो। सूक्ष्म तरिकाबाट बुझ्नको लागि प्रत्येक नक्षत्रलाई चार भाग गरियो, जसलाई नक्षत्रको चरण भनिन्छ। चन्द्रमा प्रत्येक राशिमा ढाई दिन विचरण गर्दछ। त्यसपछि चन्द्रमा अर्को राशिमा पुग्छ। वैदिक ज्योतिषमा सबै ग्रहमध्ये सबैभन्दा धेरै महत्व चन्द्रमा ग्रहको रहेको छ। यसलाई नाम राशि पनि भनिन्छ किनभने ज्योतिषको अनुसार बालकको नाम राख्ने आधार यही चन्द्र राशि हुन्छ। जन्मको समयमा चन्द्रमा जुन नक्षत्रमा स्थित हुन्छ, त्यस नक्षत्रको चरणको वर्णबाट आरम्भ हुने नाम व्यक्तिको जन्म राशिको नाम हुन्छ।
वर्तमान समयमा राशिफलसँग सम्बन्धित अधिकांश पुस्तक पाश्चात्य ज्योतिषको आधार सूर्य राशिलाई महत्व दिएर प्रकाशित भैरहेको छ। जसरी वैदिक ज्योतिषहरु चन्द्र राशिलाई नै जातकको जन्म राशि मान्दछन् र त्यसलाई मुख्यतः महत्व दिन्छन्, त्यस्तै प्रकारले पाश्चात्य ज्योतिषका ज्ञाता जातकको सूर्य राशिलाई धेरै महत्व दिन्छन्। यो मानिन्छ कि सूर्य जीवनमाआत्माको कारक हो।
नाम राशिको आशय यो हो कि तपाईंको नामको पहिलो अक्षर कुन राशिसँग सम्बन्ध राख्दछ । ज्योतिष शास्त्रमा जातकको नामको विशेष महत्व छ। वास्तवमा जातकको नाम उसको स्वभाव, गुण र व्यक्तित्वको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। त्यसैले ज्योतिष शास्त्रमा नाम राशिको विशेष स्थान छ।